Track 1: ebili — njem Lee - Official Site
Ị ma na ị na-ama ama ma ị na-mara?
Anyị niile na-agba ịnyịnya na-ezighị ezi n'akụkụ
Ma anyị na-eti anyị obi na-ezighị ezi Ihọd
"Anyị achọghị ka Chineke"
Anyị nwere ike ghara ikwu ya na anyị n'ọnụ, ma anyị na-eme anyị dum ndụ
Nke ahụ bụ onye ji obi ike ụgha, ọ bụ ndị kasị elu dịghị nso, anyị nile na-anwụ
John 5:28,29, onye-ikpe n'ebe a!
All ịrị elu
Simon • December 9, 2014 na 12:40 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a song na niile music! Chineke nyere gị onyinye ọ bụla na nzuzo na ọ bụ ụbọchị ikpeazụ nakwa na ị na-na-eduga ndị mmadụ na onye na-enye ndụ! Ọ bụ a mara mma ihe n'ihi na ụfọdụ na-etinyecha na-crazy, ma ọ dịghị ihe nwere ike ịkwụsị anyị ma ọ bụrụ na anyị na-ebili.
Ị na-akpali m niile m n'atụmatụ! #116
eliassimbeye • December 10, 2014 na 8:54 Abụ • zaghachi
ndị dị ike lyrics nwoke am si Zambia na ebe a songs ndị siri ike ibudata i nwere na-arụsi ọrụ ike iji nweta ego na download.so i ike na-arụ ọrụ a week.anyway mgbe i ìgwè ndị album ọ bụ ọnụ ahịa ya.
PastorTony • December 11, 2014 na 10:45 pm • zaghachi
a n'anya ụmụ okorobịa music!! N'Ezie wanna nweta ya m Church na Manassas Va. Gịnị a ngọzi CHINEKE!
Morgan • December 31, 2014 na 12:59 pm • zaghachi
m 14 na im ka nādabere na onye na ihe Chineke bụ,na ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie ma ọ bụ na-. M maara na m dị afọ iri na onye ọ bụla bụ na ejighị n'aka na, ma m chọrọ n'ezie ịbụ ụfọdụ. Nke a song nyeere m mara na m na-adịghị mkpa ka na-ejighị n'aka ọzọ n'ihi na o mere ọtụtụ ihe n'ihi na m na m na-adịghị mkpa ka echeghi.
Oluwafemi • January 29, 2015 na 1:14 Abụ • zaghachi
Njem lee bụ nnukwu n'ike mmụọ nsọ na m. Olee otú i n'anya izute gị, otu ụbọchị nwoke. People ova hir agwa m na anyị anya ma na-eme myiri. Ị bụ ndị dị otú ahụ a dị ike ngwá na-aka nke Chineke. Chineke na-agọzi gị nwanne!
PhantomL82 • October 13, 2015 na 9:49 pm • zaghachi
m, onye bụrụ nko?